राजनीतिक दाउपेचभित्र आरोप र प्रत्यारोप : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारराजनीतिक दाउपेचभित्र आरोप र प्रत्यारोप
यतिखेर एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले बहालवालासहित अन्य दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ९ अर्ब भाग बिलो लगाएर खाएको र आवश्यक परे त्यसको प्रमाण आफूले दिन सक्ने बताएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको उक्त आरोप भावावेगको अभिव्यक्ति मात्र हो वा सत्यको उजागर पनि हो भन्ने यकिन गर्न अझ केही समय नेपाली जनताले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । यद्यपि, सुरुको भनाइलाई सार्वजनिक सञ्चार र सामाजिक सञ्जालले धेरै नै महत्वका साथ उचालेपछि आरोपकर्ताले ‘निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाऊँ, म प्रमाण दिन तयार छु र मेरा प्रमाण प्रमाण नहुन पनि सक्छ’ भनेर आफ्नो पूर्ववर्ती भनाइमा भाका फेरेका छन् । आफू गलत भए फाँसी भोग्न पनि तयार रहेको भन्दै उनले निष्पक्ष छानबिनका लागि जनलोकपाल गठनको माग गरेका छन् । उनको आरोपमा केही पूर्वाग्रह पनि झल्किन्छ । राजनीतिक दाउपेचका लागि यस्था आरोप लगाइने गरिएका छन् ।
यसरी लगाइको आरोपका पछाडि सत्य, तथ्य छ वा जनताको मन जित्ने रणनीति मात्र हो भविष्यले बताउला । यो समयमा यो रहस्य किन बाहिर ल्याइँदै छ, त्यो पनि थाहा हुन सकेको छैन । आरोपको सत्यापन हुन बाँकी नै छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समकक्षीकै रूपमा रहेका तीन जना प्रधानमन्त्रीलाई आयोजनाबाट ९ अर्ब रुपैयाँ अनियमित तवरले बाँडेर खाएको आरोप अघिल्लो महिनामा आयोजित गोरखाको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा लगाएका थिए । उनले आरोप त लगाएका छन् तर प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । विगतमा पनि राजनीतिक दाउपेचभित्र यस प्रकारका आरोप प्रत्यारोप नभएका भने होइनन् ।
गालीगलौजको संस्कार :
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा ‘खुनी पन्जा’ भन्दै कांग्रेस आईको चुनाव चिह्नमाथि कटाक्ष गरे । प्रतिउत्तरमा भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्तालाई ‘चोर र लुटेराहरूको गिरोह’ भन्नुका साथै ‘इन्डिया मुजाहिद्दिनको समूह’समेत भने । स्वयं मोदीलाई चुनावी मैदानमा लो प्रोफाइल (चिया पसले), साम्प्रदायिक भनेर टिप्पणी गरियो । केही वर्षअघि उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘युद्ध रुचाउने बूढो मान्छे’ भनी टिप्पणी ग¥यो । जवाफमा ट्रम्पले उत्तर कोरियाली शासक (नेता) किम जोङ–उनलाई ‘आफूले पुट्के र मोटे नभन्ने’ बताए । यो साँच्चिकै हाम्रा बा भकारीभित्र लुकेका छैनन् भन्ने शैलीमा गरिएको व्यंग्यात्मक गाली थियो । यसअघि ट्रम्पले किम जोङ उनलाई ‘पागल’ र ‘सानो रकेट मान्छे’ भनेर जिस्काइसकेका थिए । यी दुुईको यो वाक्युुद्घलाई लिएर रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोमले ‘साना बच्चाको झगडा’ भनी कटाक्ष गरेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा ‘खुनी पन्जा’ भन्दै कांग्रेस आईको चुनाव चिह्नमाथि कटाक्ष गरेका थिए
२०४८ को आमचुनावमा काठमाडांैबाट प्रकाशमान हार्दा चुनाव नै नलडेका गणेशमान सिंहले ‘अर्को जन्ममा काठमाडौंमा जन्मनुु नपरोस्, यहाँका मान्छेमा विवेक रहेनछ’ भनेका थिए । प्रतिउत्तरमा मदन भण्डारीले ‘हामी त भौतिकवादी परियो, यदि ईश्वर रहेछन् नै भने गणेशमानजीको यो इच्छा छिटै पूरा गरुन्’ भनेका थिए । नियतिले भने उमेरले बूढो भए पनि कान्छो मदन भण्डारीलाई छिटै लग्यो ।
विगतमा कहिलेकाहीँ प्रचण्डले पनि ‘कहिलेकहीँ त सबै कुरा छताछुल्ल पार्दिऊँजस्तो लाग्छ’ भन्छन् । केपी ओलीले ‘त्यो मन यता सिलायो उता फाटेको छ, उता सिलायो यता फाटेको छ’ भन्दै प्रचण्डप्रति व्यंग्य गर्थे । यसपटक डा. भट्टराईले भने ९÷९ अर्ब नै बाँडेर खाएको आरोप लगाए । उक्त आरोपप्रति नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका छन् । प्रत्युत्तरमा भट्टराईले ‘जस्केलाबाट छिर्नेहरूले सत्ताको धाक नदेखाऊँ’ भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठनको माग गरेका छन् । रिसले नै होला उनले अरूलाई ‘आठ कक्षा चोरेर पास गर्नेहरू’ पनि भनेका छन् ।
यो आलेख तयारी गर्दासम्म मुख्य आरोपितले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । एक कार्यक्रमकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ‘हामी त्यस्तो गैरजिम्मेवार र अनैतिक हुन सक्दैनौं । त्यस्तो हर्कत हामी गर्न सक्दैनौ’ भनी आरोपको परोक्ष पारामा खण्डन गरेका छन् । तर, डाक्टर भट्टराई प्रमाण सडकमा देखाउँदै हिँडने चिज होइन, आवश्यक पर्दा सम्बन्धित निकायलाई दिने कुरा गर्छन् ।
सफाइ लिने मौका:
यो आरोपले डा. भट्टराई वा नेतात्रयमध्ये आखिर को दोषी हुन त ? गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनु उनीहरूका लागि सबैभन्दा बुद्धिमानी देखिन्छ । जनताका माझ जाँदा पनि कम्तीमा पनि डा. भट्टराईलाई या त प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिनुप¥यो या त आरोप स्विकार्नु प-यो । अनि आरोपकर्ताले आजसम्म मौन बसेर यतिबेला मात्रै किन यो कुरा उठाए ? कतै उनी पनि काले काले मिलेर खाऊँ भालेमा त थिएनन् ? आशंका उब्जेको छ । मिथ्या आरोप लगाएको भए उनी पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।
उनको आरोपमा केही पूर्वाग्रह पनि झल्किन्छ । राजनीतिक दाउपेचका लागि यस्ता आरोप लगाइने गरिएका छन्
उक्त आरोप चानेचुने छैन । सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भन्ने उखान नै छ । कहाँ खाए ? कसरी खाए ? किन खाए ? सबै कुराको जानकार आरोेपकर्ता पक्कै छन् । बिनाजानकारी अर्काको चरित्रहत्या गर्न हुँदैन÷पाइँदैन भन्ने कुरा डा. भट्टराइलाई राम्रैसँग थाहा छ । फेरि यो चुनाबी मौसम पनि होइन । जनमत बटुल्नलाई अर्कोलाई आरोप लगाएर आफू चोखिन परोस् । यसैकारण यस कुराको गम्भीरतापूर्वक सत्यापन हुन जरुरी छ । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी छ । विगतमा ७० करोडको आरोप प्रमाणित नहुँदै एक जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । रोशनी प्रकरणमा न्यायालयले सफाइ दिए पनि तत्कालीन सभामुखको पद गुमेको गुमै भयो ।
इतिहासको लामो कालखण्ड बोकेको र आफ्नैै विरासत भएको नेपाली कांग्रेस पार्टी र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आफ्नै इतिहास छ । विगतमा भट्टराई र प्रचण्ड एउटै पाटीमा रहेर काम गरेका परिवर्तनका लागि ज्यान हत्केलामा राखी टाउकाको मूल्य चुकाएका यी दुईजना सहयात्रीको एकताबिना गणतन्त्र सम्भव थिएन । १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका, आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बाचा गरेका केपी ओलीको गणतान्त्रिक यात्रामा आफ्नै योगदान छ । यी सबै महत्वपूर्ण हस्तीहरूका लागि यी आरोप चानेचुने होइनन्, त्यो पनि खाइखेलेकै समकक्षीबाट लगाइएको छ । यसैकारण पनि यस मामिलामा वार कि पार हुनैपर्छ ।
सधैं सग्ला घाम हुँदैननः
भारतको छत्तीसगढ राज्यमा भाजपाका नेता डा. रमनसिंह निकै लोकप्रिय थिए । २००३ देखि लगातार १५ वर्ष शासन गरेका उनी लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री पनि बने । २०७५ साल मंसिरमा भएको विधानसभा चुनावमा उनी भाजपाकै गढ मानिएको छत्तीसगढमा कांग्रेस आइसँग नराम्ररी पराजित भए । उनलाई भीआईपी प्रयोगका लागि हेलिकोप्टर खरिदमा अनियमितता गरेको, ग्लोबल टेन्डर गर्दा अर्बाैं रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लगाइयो । उनीमाथिको आरोपलाई अदालतले त सफाइ दियो तर जनताको मनबाट सफाइ पाउन सकेनन् । अन्ततः गौंडो कुरेर बसेका जनताले आवधिक चुनावमा हराइदिए । चौथोपटक पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने उनको सपना हेलिकोप्टर काण्डकै कारण चकनाचुर भयो ।
आरोप आरोपकै लागि सोच्दा यसले राजनीति गर्नेलाई कुनै पनि दिन घाटा पर्न सक्छ । यस्ता विषयमा यदि आरोपितहरू निष्कलंक छन् भने शक्तिशाली आयोग गठन गर्न चुक्नुहुँदैन । सफाइका लागि यो उनीहरूलाई एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । होइन भने जनताले गौंडो कुरेर बसेका हुन्छन् । कुनै पनि दिन रमनसिंहको नियति नेताले पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २,४४५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ७,८३३ जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा...
सत्ताइतरका दलहरुको छलफल आज
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले ल्याएको ‘राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी दुई अध्यादेश फिर्ताका लागि दबाब बढाउन सत्ताइतर दलसँग छलफल थाल्ने भएको...
लिदी पहिरोः मृतकको संख्या २४ पुग्यो
कोरोना महामारी र श्रमिक समस्या
२२ वर्षमा झन्डै साढे ५ करोड गैरकानुनी कमाइ
असारे धान सार्वजनिक
अन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन, तल्ला तहका अधिवेशन स्थगित
महेश्वर गौतम - July 25, 2021